Casharrada - SmartMe
Dom » Casharrada
Markaad la kulanto caqabad cusub oo khibrad kaa weydo, adeegso talobixin farsamo. Waxaan sharaxeynaa howlgalka nidaamyada maaraynta guryaha caqliga leh waxaanan kula talinaynaa qalabka la dooranayo. Tilmaamahayaga tallaabo-tallaabo ayaa kuu sharraxaya waxyaabaha adag ee farsamada si aad u hesho aqoon lagu kalsoonaan karo.
Koorso loogu talagalay waayeelka - Sida loo rakibo Browser Chrome
SmartMe ee waayeelka
Tiknoolajiyadda ayaa loo maleynayaa inay noqon karto qof walba, da ’duna waa tiro uun, mana aha mid si gaar ah u cajaa’ibsan 😉 Waxaan taageernaa Waayeelka waxaanan taageernaa ololeyaasha sida Paweł, oo ah tafatirahayaga, kaasoo sii daayay fiidiyoow uu ku muujinayo sida loo rakibo ...
Sida loo isticmaalo maraakiibta xamuulka ee Aliexpress - hage gaaban oo loogu talagalay qof walba
Sidaad ogtahay, waxaad wax kaga dalban kartaa alaabaddeena booliiska Aliexpress muddo dheer. Taasi waa sababta aan kuugu diyaarinay hage kooban oo hubaal kaa caawin doona dukaamaysigaaga. Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato sida ...
Isbarbardhigga faakiyuumka nadiifiyaha iyo weelasha boorka
Kadib tobanaan sano oo horumar ah, nadiifiyeyaashu waxay dhameystireen cusbooneysiinta xakamaynta laga bilaabo badhamada jirka ilaa xakamaynta barnaamijka, laga bilaabo shilalka shilalka illaa qiimaynta dhammaystiran ee ka-hortagga caqabadda, laga bilaabo hawlgal aan kala sooc lahayn illaa qorshe waddo firfircoon. Iyadoo horumarka degdega ah ee tikniyoolajiyadda, caqliga ...